Zimbabwe Human Rights NGO Forum Inoti Mapurisa Ndiwo Ari Kunyanya Kutyora Kodzero dzeVanhu
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore rapera inoburitsa pachena kuti mapurisa ndiwo ari pamberi pakutyora kodzero dzevanhu munyika.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe/2017, VaDzikamai Bere vanoshanda kuZimbabwe Human Rights NGO Forum kunze kwekutyora zvakanyanya kwekodzero dzevanhu nemapurisa, sangano reZimbabwe Consolidated Diamond Company rakakonzerawo rufu rwevanhu vashanu kuminda yemangoda kwaMarange.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga vati zvinosuwisa zvikuru kuti mapurisa anofanirwa kuchengetedza veruzhinji ndiwo ari kutyora kodzero zvakanyanya.
VaTrevor Simbanegavi vapawo huchapupu hwavo hwekupfuurwa nemapurisa mushure mekufungidzirwa kuti vaive mbavha dzakapakata zvombo vakarasikirwa negumbo kunyangwe zvazvo vasina kuzobatwa nemhosva.
VaSimbanegavi vatetera kuti hurumende inofanirwa kuchengetedza vanhu vanotyorerwa kodzero nemapurisa anenge aita zvisiri pamutemo pamwe nekuona kuti varipwa. Vatiwo mapurisa anofanirwa kutanga aongorora mhosva asati ashandisa zvombo.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti kodzero dzevana vechikoro vanosvika zviuru makumi mana nemasere nemazana maviri vakatyorerwa kodzero. Sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Jestina Mukoko vatiwo izvi havazvitarisiri.
Vamwe vakadomwa mugwaro iri mukutyora kodzero vanosanganisira bato reZanu-PF, madzishe nevemauto.